Thursday, 11 April 2013 00:01	नागरिक
भाषा शर्मा- नेपालका विभिन्न जाति-जनजातिका आ-आफ्नै नयाँ वर्ष भए पनि विक्रम सम्वत आम नेपालीको नयाँ वर्ष हो। साल फेरिँदा मनका इच्छा-आकांक्षा फेरिनु स्वभाविक मानिन्छ। अबको तीन दिनपछि हरेकको घरका भित्तामा नयाँ वर्षको पात्रो झुन्डिनेछ।
Saturday, 30 March 2013 18:23	नागरिक
रोहित खतिवडा- एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भर्खरै अन्त्य भएको थियो। द्वन्द्वको प्रभाव अन्यत्र जस्तै धादिङमा पनि आलै थियो। अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको हेरचाह थिएन। उनीहरूको भविष्य अन्यौलमा थियो। यी १० जनाको उद्धार र सहयोग गर्न लागि परे केही जागरुक बालबालिका।
Saturday, 30 March 2013 15:16	नागरिक
सौरभ कार्की- 'आश्रिया, ए आश्रिया!'
Saturday, 30 March 2013 14:14	नागरिक
वसन्तप्रकाश-सडकछेउ एउटा अजंगको होर्डिङ बोर्डमा अमूलको गञ्जी लगाएर विराजमान देखिए, सैफ अली खान। सानी छोरीले भनी- 'उः उः पुंगी बजाके।'
सैफको नाम थाहा थिएन उसलाई। मूल पात्रकै नाम थाहा नपाएपछि पृष्ठभूमि र चरित्रको के पत्तो होस्! अन्यथा मेरा पिताजीका पालाका नामुद क्रिकेटर नबाब पटौदी र होनहार नायिका शर्मिला टैगोरका एकल पुत्र सैफका बारेका धेरै कुरा गर्थी होला।
'आमा' पुगिन् 'चपली हाइट'
Saturday, 30 March 2013 15:09	नागरिक
विष्णु शर्मा- नेपाली फिल्मले आउँदो वर्ष आधा शताब्दीको यात्रा पूरा गर्दैछ। प्रकाश थापाले रोपेको वृक्ष निश्चल बस्नेतहरू मलजल गर्दैछन्। साहवंशदेखि गणतन्त्रसम्मको घामपानी खेपिसके पनि दर्शकले फल भने चाख्न पाएका छैनन्; त्यो फल- फिल्मबाट समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिले खोजेको मूल्य हो।
Saturday, 23 March 2013 09:17	नागरिक
किशोर नेपाल -मनहरूको कथा पनि अचम्मकै छ। एउटा होइन, दुइटा होइन, तीनवटा होइन। असंख्य मनहरूको कथा। अशान्त भएपछि मनहरू बहकिन थाल्दछन्। एलेन गिन्सवर्गको कविताजस्तो - ए मेरो विक्षिप्त मन, आफ्नै मानव शरीरलाई जोतेका थिएनौ तिमीले, के गर्ने हो तिमीलाई थाहा पनि छैन, पूर्वजन्ममा जे गरेका थियौ तिमीले, भोग गर्दैछौ, ऊ तीन लोकको स्वामी हो, उसको स्मृतिमा पछिल्ला तीनजन्मको सम्झना जीवित छ, किन सम्झिने प्रयत्न गर्दैनौ मन, असी हजार चक्र पूरा गरेपछि तिमीले पाउने त्यही तीन वित्ता जमीन त हो।
अमेरिकी आकाशमा घनचक्कर
Saturday, 23 March 2013 09:16	नागरिक
सञ्जीव उप्रेती -मलाई आकाश र समुद्र दुवैसँग प्रेम छ। विडम्बना! म यी दुवैको प्रेमी बन्न सकिनँ। न पाइलट बनेर आकाश चुम्न सकेँ, न पानीजहाजको चालक बनेर सागरसँगै पिरती गाँस्न सकें। यस वर्ष 'भ्यालेन्टाइन्स डे' को चार दिनपछि सान ओबिस्पो जाँदा दुवै इच्छा आंशिक भए पनि पूरा गर्ने अवसर पाएँ। मैले आकाशमा विमान उडाउने पहिलो अनुभव लिएँ। प्रशान्त महासागरको क्षितिजमा पोतिएका सूर्यास्तका रंगहरूलाई आकाशबाट धीत मरुन्जेल हेरें।